Fizahan-tany divay any Espana | Vaovao momba ny dia
Isabel Catalan | | kolontsaina, gastronomy
Ny fambolena ny voaloboka dia lasa zavakanto any Espana. Tsy mahagaga, noho izany, fa izy io dia iray amin'ireo mpamokatra divay lehibe indrindra manerantany, miaraka amin'ny tanimboaloboka 900.000 hektara sy voaloboka maro karazana.
Fotsy, rosà, mena, lamandy, rongony, manjelanjelatra ... izy rehetra dia mifangaro tsara amin'ny lovia iray ary iray amin'ireo zavatra izay hahatonga anao hankafizinao indrindra an'i Espana dia ny gastronomie ary, mazava ho azy, ny divay.
Ny fanaovana fizahan-tany divay any Espana dia traikefa iray izay hahafahanao hahafantatra orinasa mpamokatra divay nentim-paharazana na avant-garde, hahazo fampianarana avy amin'ny sommeliers manam-pahaizana, matory eo an-tanimboaloboka.… Manaraka izany, manome anao hevitra maro izahay hankafizanao an'ity tontolo ity miaraka amin'ny namanao na ny fianakavianao.
1 Kolontsaina divay
2 Làlan-divay any Espana
Ny divay dia ampahany lehibe amin'ny kolotsaina any Espana, amin'ny maha-firenena Mediterane azy. Mandritra ny jeografia misy tranombakoka marobe manokana izay hampiseho aminao ny fombafomba fanomanana divay sy ny famelabelarana azy: avy amin'ny Museum of the Wine Cultures of Catalonia (VINSEUM), mankany amin'ny Casa del Vino "La Baranda" ao Tacoronte na ny Thematic Center "Villa Lucía" ao Álava mba hitonona vitsivitsy.
Làlan-divay any Espana
Raha te hahafantatra ny kolontsain'ny divay isam-paritra ianao, dia afaka mahita lalan-kaleha amin'ny alàlan'ny foibeny manan-tantara sy ny tanimboaloboka sy ny famokarana divay. Any Espana dia misy làlan-divay marobe izay toerana fitsangatsanganana manan-karena ara-kolontsaina sy gastronomika lehibe ary izy rehetra dia manana hetsika, sary ary fety malaza izay hahatonga ny dianao ho traikefa miavaka.
Ny dia dia afaka manomboka any Galicia, any avaratra andrefan'ny firenena. Ny Rías Baixas Route no fonenan'ny divay Albariño: ron-kena vaovao mety hifangaro amin'ny trondro sy hazan-dranomasina. Araraoty ny fahafaha mahita ny morony, miaraka amoron-dranomasina mahavariana tonga lafatra amin'ny fanaovana spaoro rano.
Any avaratry Espana ihany koa dia somary lavitra atsinanana ny làlambe Rioja Alavesa. Eto dia vita ny divay espaniola malaza indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho fanampin'izany, amin'ity toerana ity ianao dia afaka mahita trano avant-garde sy famiazam-boaloboka heverina ho katedraly divay, izay asan'ny mpanao maritrano malaza toa an'i Santiago Calatrava na Frank O. Gehry, ankoatry ny hafa.
100 kilometatra fotsiny no misy lalan'ny divay hafa, dia ny Navarra. Ny tanàna toa an'i Olite na Tafalla dia malaza amin'ny divay rosé. Ity zotra ity dia mampatsiahy ny maha-zava-dehibe an'io tany io nandritra ny Camino de Santiago, nambaran'ny UNESCO ho toy ny vakoka manerantany.
Ny dia dia mitohy amin'ny alàlan'ny Aragon, manaraka ny lalan'ny divay divay Somontano izay misy divay mahafinaritra. Ao amin'ny faritanin'i Huesca, ankoatry ny tanimboaloboka, afaka mahatalanjona isika amin'ireo fitambaran'olona marobe ao Barbastro na Alquézar ary koa ny Sierra y Cañones de Guara Natural Park, tontolo tokana any Eropa.
Ny fijanonana manaraka amin'ny lalan'ny divay dia Catalonia, izay manasa anao hizaha ny Làlan'ny divay Penedès Wine sy Cava. Ny miteny Catalonia dia milaza cava, zava-pisotro misy tsiro tsy azo tononina. Amporisihina tokoa ianao hitety fitsangantsanganana amin'ny trano rantsankazo sy famiazam-boaloboka hahitana ny lova ara-kolontsaina mahavariana ao amin'ny faritra, miaraka amin'ny ohatra maro amin'ny zavakanto Romanesque sy Modernist.
Any atsimo kokoa dia hitantsika ny lalan'ny divay Jumilla any Murcia, izay mampiavaka ny divay nahazoany loka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ilaina ihany koa ny mitsidika ny tanàna taloha sy ny manodidina azy voajanahary, miaraka amin'ny Valan-javaboary Sierra del Carche.
Ny lalan'ny divay Montilla-Moriles dia miditra amin'ny faritanin'i Córdoba. Amin'ity fitsidihana ity dia hanana fotoana ahafahanao manana tapas, trano fisakafoanana gastronomika miorim-paka ao amin'ny faritra. Tsy afaka mivoaka ianao raha tsy mitsidika ny tranony marobe sy ny katedraly-mosque, nambaran'ny UNESCO ho lovambe manerantany.
Ny làlan'ny divay La Mancha no teboka faran'ity zotra ity. Fantatrao ve fa noho ny isan'ireo tanimboaloboka hektara, Castilla-La Mancha no faritra be mpamboly divay indrindra eto an-tany? Ny lalantsara eoropeana lava indrindra any Eropa dia hita ao amin'ity faritra ity: ny làlambe Don Quixote. Mijanona eny an-dàlana mba hanandrana ny gastr gastrikan'ny La Mancha ary mankao amin'ny valan-javaboary Tablas de Daimiel na Lagunas de Ruidera hahita ny natiora La Mancha amin'ny hakantony rehetra.
Toy izao ny làlam-divay, fomba iray voalohany hahitana ny harena gastronomikan'i Espana. Manitra amin'ity traikefa ity ny hanitra, tsiro, tantara ary zavakanto. Halahelo azy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » gastronomy » Fizahan-tany divay any Espana
Ny faritra manodidina an'i Madrid